USony Walkman Z, umdlali wemultimedia ene-Android 2.3 Isonka sejinja | I-Androidsis
Fabio | | Ezinye izixhobo, Sony, Iinguqulelo ze-Android
Kude kube kudala, iinkampani zokuvelisa zazibheja kwi-Android kuphela ukukhuphisana neApple kumacandelo eefowuni kunye neetafile. Emva kwexesha, i-Samsung isungule i-Galaxy Player yayo ukujongana ne-iPod Touch kwaye ibali litshintshiwe.
Isony isendleleni efanayo njengoko ihambise i-Android player yemultimedia, ebizwa ngokuba yiWalkman Z, eza kuphehlelelwa kungekudala. Oku kwenzeke kwisakhelo somnyhadala weteknoloji we-IFA 2001 owenzeka kwisixeko saseBerlin, eJamani.
Iimpawu zeSony Walkman Z zinomdla. Isixhobo esiphathwayo sinombala we-4,3-intshi ye-TFT LCD yesikrini esineesisombululo seepikseli ezingama-480 × 800 kwaye ixhotyiswe nge-Android 2.3 ye-Gingerbread inkqubo yokusebenza yeselfowuni kunye ne-2 GHz Nvidia Tegra 1 ye-processor-core.
Ukongeza ine-512 MB yememori ye-RAM kwaye iya kuthengiswa kwiinguqulelo ze-16 GB, 32 GB kunye ne-64 GB yememori yangaphakathi.
Ngokumalunga nokunxibelelana kwayo, isidlali semultimedia seSony Walkman Z sinika iWi-Fi, iBluetooth kunye negalelo le-Micro-HDMI.
I-Sony Walkman Z inokuthengwa ngexabiso elisusela kwi-350 ukuya kwi-550 yeedola.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » U-Sony Walkman Z, umdlali wemultimedia ene-Android 2.3 Isonka sejinja
UJuan Jose Moya sitsho
Andisiqondi ukuba kutheni isony ukuba ibeka isiseko esiphindwe kabini kumdlali olula, kwii-mobiles ezinje nge-xperia arc okanye i-xperia arc s hayi…. ngakumbi le yokugqibela igqityiwe ukuphuma….
U-Sony undiphoxile kakhulu malunga noku.
Phendula kuJuan Jose Moya
Enye into engaqondakaliyo yimemori encinci ye-RAM ... i-512 MB ayonelanga ukuba ndizame ukuba sisixhobo "sokusika". Kwelinye icala (kwaye endicinga ukuba yimpazamo ye-Samsung), isikrini siqhubeka nokwandisa kodwa isisombululo sihlala sinye. Ndicinga ukuba kwiscreen sobungakanani (i-intshi ye-4,3) isisombululo se-QHD sinokulunga. Ngaphandle koko, ndiyathandabuza ukuba inokukhuphisana ne-iPod kunye nokubonisa kwayo i-retina.
UJose Avila Thompson sitsho
Molweni zihlobo ,,, kulungile, ndiyavuma uluvo lomlingane uJuan, ngokunxulumene nenuclei, kwaye ndongeza umbono wokuba ifemu kufuneka yakhe amaqela apho adibanisa yonke into njengaxa ayenzela isymbian, ekhumbula imodeli uluvo lwam Yaguqula umhlaba wemultimedia kwiifowuni.I (W810) yeza nayo yonke into yaza yathengiswa okweqebengwana elishushu phantse iminyaka emi-2 kwaye okuninzi oko kubonisa irekhodi lam, ndihlala eSwitzerland kwaye ndisayibona esitratweni.
Ewe, ndiyabulisa, ndiyabulisa
Phendula kuJose Avila Thompson
UDaniel Argentina abahlobo abalungileyo ndiyamthanda umdlali waseJamani z ulunge kakhulu .. Ndifuna ukwazi ukuba iza kuza kwilizwe lethu ukuyithenga okoko ukungeniswa kuvaliwe andinakukuthenga phesheya